‘शैक्षिक गुणस्तरको आधार तयार पार्दैछौ’ | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home अन्तर्वाता ‘शैक्षिक गुणस्तरको आधार तयार पार्दैछौ’
‘शैक्षिक गुणस्तरको आधार तयार पार्दैछौ’
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०८:१७
वि.स २०४८ मा समुदायको अगुवाईमा बेनीमा स्थापना भएको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा पछिल्लो समय केही सुधारको कामहरु भएका छन् । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने जिल्लाकै अग्रणी शैक्षिक संस्थाका हिसाबले म्याग्दी क्याम्पसले गुणस्तर सुधारको पहल गरेको छ । मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा शास्त्र संकायमा कक्षा ११ देखि स्नातक तथा व्यवस्थापन संकायमा स्नाकोत्तर तहको पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको क्याम्पसमा एक हजार जना भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । प्राबिधिक विषयको पढाई सुरु गर्न सम्भाव्यता अध्ययनमा रहेको म्याग्दी क्याम्पस गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायण (क्युएए) तर्फ अघि बढेको छ । यसै सन्दर्भमा क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीसँग रिखार दैनिकका प्रकाशक सन्तोष गौतमले गरेको कुराकानी ।
क्याम्पसमा क्युएएको स्याट टोली गठन गरेका छौ । गोखरबहादुर जिसीको संयोजकत्वमा गठन भएको स्याट टोलीले क्याम्पसको मौजुदा बस्तु अवस्थाको सेल्फ स्टडी (स्वअध्ययन) गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । क्वालीटी एक्युरेन्स सँग सम्बन्धीत १२० वटा सूचकलाई आधार मानेर टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेका थियो । समयसिमा सहित विश्व विद्यालय अनुदान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायौ । सूचक अनुसार तत्कालै सुधारको काम गर्न आयोगले अनुदान पनि दियो । त्यही आधारमा रहेर फिल्डमा सुधारको काम गरेका छौ ।
पछिल्लो चरणमा क्याम्पसमा भौतिक, शैक्षिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधारका कामहरु भएका छन् । सुधारका कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर डकुमेन्टेशन गरेका छौ । कक्षा कोठादेखि प्रशासनिक, सञ्चालक समितिमा आन्तरिक काम धेरै भएका छन् । ठूलो मात्रामा रुपान्तरणको काम गरेका छौ ।
क्युएए भनेको के हो ? शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
क्युएएलाई अंग्रेजीमा क्वालीटी एसोरेन्स एग्रोडिटेशन र नेपालीमा गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायण भनिन्छ । यो शैक्षिक गुणस्तरको मात्र नभएर भौतिक जस्तै यहाँको खानेपानी, पुस्तकालय, प्रशासन लगायत सबै पक्षको व्यवस्थापन र हरेक कुरामा गुणस्तर सुधार गर्न खोजेको हो । स्मार्ट सिटी, स्मार्ट नगरपालिका भन्ने टर्मिनोलोजी जस्तै क्याम्पसलाई पनि स्मार्ट र सबै कुरामा एक लेभलको बनाउने भन्न खोजेको हो ।
त्यसका लागि धेरै सूचकको आधारमा व्यवहार र फिल्ड (कार्यक्षेत्र)मा रुपान्तरण तथा सुधार गर्नुपर्छ । हाम्रो भौतिक संरचनाले शैक्षिक गुणस्तरसँग मापन गर्ने हुनुपर्छ । प्रशासनको कोठा, प्रमुख, अध्यक्ष, बैठक हल, कक्षा कोठा, पुस्तकालय, छात्रावास, कम्पाउण्ड, खेलमैदान लगायत सबै भौतिक वातावरण चुस्त दुरुस्त बनाइरहेका छौ । सुझाव अनुसार अझै सुधार गरिरहेका छौ । शैक्षिक हिसाबले हाम्रा बिद्यार्थीको रिजल्ट नेशनल लेभल भन्दा माथि हुनुपर्छ । अझै माथिको अपेक्षा गरेर गुणस्तर सुधार गरेर लैजानुपर्छ । हाम्रा विद्यार्थी बजारमा विकाउ हुनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो स्याट टिमले नियमित विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
यो क्याम्पसमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु रोजगार, पेशा व्यवसाय के गरिरहेका छन भनेर अध्ययन गरिएको छ । म्याग्दी क्याम्पसमा गुणस्तरको लागि आधार तयार पार्दै छौ । नियमित कक्षाका अलावा पठनपाठनलाई अनुसन्धानमुलक र व्यवहारिक बनाउन लागेका छौ । भोकेशनल, रिसर्च, लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा सञ्चालन गर्न खोजेका छौ । अनुसन्धानमा विद्यार्थीलाई संलग्न गराउछौ । शिक्षकहरुका लागि अनुसन्धान सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिसकेका छौ । क्याम्पसमा पढाई हुने शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई तालिमप्राप्त र बिकाउ तथा प्रतिस्पर्धामा अगाडी आउन सक्ने हुन्छन् ।
स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको बेनी नगरपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्ष क्याम्पस सञ्चालक समितिको पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । उद्योग वाणिज्य संघ, विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधिको रुपमा स्ववीयु पनि पदेन सदस्य छन् । पूर्व विद्यार्थी मञ्च र अभिभावक संघ गठन गरेका छौ । यो क्याम्पस स्थापना देखि अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदासम्म बजारबासी, जिल्लाबासी र प्रवासीहरुको ठूलो योगदान र सहयोग छ । २०४८ सालमा स्थापना गर्दा होस या दुई वर्षअघिको महायज्ञमा समुदायको राम्रो सहयोग पाएका छौ । क्याम्पसका प्राध्यापक, कर्मचारीहरुको राम्रो सहयोग र साथ छ । राती सम्म खटिएर काम गर्नुभएको छ ।
क्याम्पसलाई जागिर खाने ठाउँको रुपमा हेरिने विगतको प्रवृति छैन् । यद्यपी यसलाई बुझाउन हामीलाई केही समय लाग्यो ।क्याम्पसलाई पूर्ण समय दिने प्राध्यापक कर्मचारीहरुको संख्या ठूलो छ । संकायहरुको आ आफ्नै कार्ययोजना बनाइएको छ । निजी विद्यालयमा जस्तै आन्तरिक परिक्षा गराउदैछौ । आन्तरिक परिक्षामा सहभागि हुने विद्यार्थी मात्र छात्रवृति सुबिधामा छनौट हुन पाउँछन् । अतिरित्त कक्षा सञ्चालन यही गर्छौ । सञ्चालक समिति अन्तरगत गठन भएका विभिन्न समिति र उपसमितिहरु सक्रिय हुनुहुन्छ । क्याम्पस सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरु तत्कालै कार्यान्वयन गरेका छौ ।
म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नाकोत्तर तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने चर्चा चलेको थियो । त्यो के भइरहेको छ?
म्याग्दी क्याम्पसलाई यो अवसर दिनुभएकोमा सन्तोष जि र रिखार राष्ट्रिय दैनिक परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।
Previous articleम्याग्दीका निर्मल पूर्जा ७ महिनामा १४ अग्ला हिमाल चढ्ने तयारी
Next articleजापानमा दुर्घटनामा परी एक म्याग्देलीको मृत्यु